Nga - University of Johannesburg
Home » Faculties of Humanities » School of Languages » Languages, Cultural Studies and Applied Linguistics (LanCSAL) » Department of Linguistics » Linguistics » IsiZulu » Nga
Kuyini ukufunda ngezilimi
Ukufunda ngezilimi yisayensi yokufunda ngezilimi. Kulesi sifundo sifunda ngezihloko ezithathekisa kakhulu: Luvela kuphi ulimi? Lwakheke kanjani? Silugcina sibuye siluthole kanjani emqondweni wethu? Luguquka kanjani ulimi ngezikhathi? Silusebenzisa kanjani ulimi emhlabeni esiphila kuwona? Siqondana kanjani? Nokunye okuningi…
Isigaba sethu sibekeke ngendlela ekhethekile ukwamukela izidingo zabafundi abanentshisekelo kuthiyori nokusetshenziswa kwezilimi. Isigaba sokufunda ngezilimi siyisigaba esamukela abazofundela iziqu ze-BA Language Practice. Izifundo eziyingxenye yalezi ziqu ziklanywe ukufundisa amakhono anjengokuhlela umbhalo, ukuhumusha, ukutolika nokucwaninga. Abafundi abasohlelweni lweziqu ze- BA Language Practice babuye bafundiswe izifundo zokwethulwa kwesifundo ngezilimi ukuxhumana kwezinhlanga ezahlukene, ukuqwashiswa ngezilimi, Ukufunda ngezilimi ngokwezenhlalakahle nangokwengqondo
Zinhlobo zini zamathuba emisebenzi atholakalayo?
Uma sekuphothulwe izifundo abafundi basuke sebekulungele ukungena emsebenzini njengabahumushi, abatoliki, abahleli bezilimi, ababhali abafanekisayo, abahleli abafanekisayo, abafundisi bezilimi noma abasebenza ngezilimi.
Kungenzeka yini ukufundela iziqu eziphezulu kulesi sifundo ngezilimi?
Yebo. Ezingeni leziqu eziphakeme, iziqu zethu ze- honours ne-master’s esifundweni sokusebenzisa izilimi kugxile ezifundweni zokuhumusha, zokuhlelwa kombhalo nezokutolika. Sihlinzeka ngalezi ziqu eziphezulu ezilandelayo:
· Iziqu ze-Honours esifundweni sokusebenzisa izilimi (ukufunda ngokugcwele noma ngokungagcwele)
· Iziqu ze-Master’s esifundweni sokusebenzisa izilimi
· Iziqu ze-Doctorate esifundweni sokusebenzisa izilimi
Ngingasithinta kanjani iSigaba sezilimi e-UJ?
Wamkelekile ukushayela uNkz. Trudie Strauss ku +27 11 559 2694 noma ungathumela i-imeyili ku-trudis@uj.ac.za.
Ngingalithola kuphi ifomu lokufaka isicelo?
Ungathinta Indawo yokubhalisa yaseNyuvesi yase- Johannesburg ku-+27 11 559 4555. Amafomu okufaka izicelo ayatholakala nakuwebhusayithi yase-UJ: www.uj.ac.za.
Kufanele ngifake nini isicelo sohlelo lweziqu ze- BA Ukusebenza Ngezilimi?
Abafundi abavela kumazwe ngamazwe kufanele bafake izicelo ngaphambi komhla wama-31 kuNcwaba . Ukuvalwa kwezinye izicelo kungomhla wama-31 kuMfumfu.